Midowga Yurub oo Somaaliya lacag ugu deeqay – Radio Daljir
Oktoobar 20, 2017 7:45 b 0
Veronique Lorenzo, oo ah Wakiilka Midowga Yurub ee Soomaaliya ayaa manta booqatay Isgoyska Soobbe oo uu shan maalmood ka hor ka dhacay Qarax ay ku dhinteen dad aad u farabadan.
Haweeneydan ayaa shir jaraa’id oo ay wadajir u qabteen Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Thaabit Cabdi Maxamed waxaa ay ka tiri “Waxaannu qeybinnay tiro Deeq dawo ah,si aan u caawinno shaqaalaha gurmadka deg degga ah iyo howlgalka badbaadada ah, Xafiiskeenna halkanna waxaa uu hadda ku dhawaaqay in 100Kun oo Yuuroo uu ugu deeqay dadka dhibaatada soo gaartay,waxaana rajeyneynaa ij si deg deg ah loo bixiyo”.
“Waxaan halkan u nimid aniga iyo kooxdeyda in aan soo aragno bur burka ka dhashay waraxa ee halkan ka dhacay,waxaan bogaadinayaa duqa Muqdisho iyo dhallinyarada Magaalada Muqdisho oo muujiyay shaqo aad u quruxbadan oo ah in waddadii dib loo dayactirayo”.
“Waxaa kale oo aan halkan u nimid in aan qiimeyno khasaaraha si aan uga fakarno sida aan idin taageeri karno.,waxaana ka wadahadli doonnaa guddoomiyaha Gobolka Banaadir”.
Madaxweyne Farmaajo oo isugu yeeraya Xildhibaanada Labadda Aqal